1. I-Sesame paste (iTahini paste) ityebile kwiiproteni, iiamino acid, iivithamini kunye neeminerals, kwaye inexabiso eliphezulu kwezempilo. 2. Umxholo wecalcium wencindi yesame uphezulu kakhulu kunemifuno kunye neembotyi, okwesibini kulusu lwe-shrimp. Kuyanceda ...
1. Ingakhuthaza ukusebenza kwezintso Olunye uphononongo lubonisa ukuba ipea protein inokuba yenye yezona zinto zingcono kubantu abaneengxaki zezintso. Ngapha koko, ngokophando, ipea protein inokunceda ukulibazisa okanye ukuthintela ukonzakala kwezintso kwabo banexinzelelo lwegazi. Inoku ...
Okona kusasazeka kwamantongomane kuya kuthi ngokuqinisekileyo kuzise utshintsho olululo kwindlela otya ngayo yibhotolo yamandongomane. Yenziwe ngamandongomane omisiweyo kunye nosiweyo kwaye ihlala ifakwa kwiqela lokutya okusempilweni. Igcwele izondlo eziluncedo kwimpilo yakho okoko nje ...
1. Ukutya okulungeleyo - nanini na, naphi na, ukulungele ukutyiwa ngokuvula iinkonkxa. 2. Gcina ixesha - xa uthenga, zintathu izidlo zokuphola. Gcina ubunzima bokupheka, ukonwaba kosapho. 3. Ukutyeba okunesondlo-amaxesha amane ...
Ukuze kukhuthazwe uthando lwabasebenzi ngomsebenzi, ukuseka unxibelelwano oluqinisekileyo, ukuthembana, ukumanyana kunye nentsebenziswano phakathi kwabasebenzi, ukuhlakulela ulwazi lweqela, ukuphucula ukuqonda koxanduva kunye nokuba lilungu labasebenzi, kunye nokubonisa isan San ...
Intlanganiso yeNkampani yeSanniu ibibanjelwe
Ixesha liyahamba kunye nexesha liyabaleka. U-2020 oxakekileyo udlulile ngokuqhwanyaza kweliso, kwaye i-2019, egcwele ulindelo, iyeza kuthi. Unyaka oMtsha, uzalela iinjongo ezintsha kunye nethemba. Intlanganiso yonyaka ka-2021 yeNkampani iSanniu ibibanjelwe kwiNew Era Hotel e ...
Ixabiso elityiwayo nezilumkiso zeYuba / Iibhontshisi eziMisiweyo zeBhontshisi
Iibhontshisi zekhontshisi ziqulathe iintlobo zezimbiwa, zongeza ikhalsiyam, zithintela i-osteoporosis ebangelwa kukuswela kwecalcium, ikhuthaza ukukhula kwamathambo kwaye igxile kubume beembotyi zesoya, yintshatsheli yesondlo kwiimveliso zesoya. Amaxesha amaninzi badla yuba nga b ...
Ukutya amandongomane anetyuwa, Intonga yeBhontshisi entsha, Iipakethi zesosi yeSoy, Ikhukhi yeLadyfinger, Umtya weHawthorn, Iibhiskithi zaBantwana,